Mauricio Pochettino Oo Ka Hadlay Wixii Lionel Messi Iyo Neymar Kala Kulmeen Taageerayaasha
HomeWararka CiyaarahaMauricio Pochettino oo ka hadlay wixii Lionel Messi iyo Neymar kala Kulmeen Taageerayaasha
March 15, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France 0
Maamulaha kooxda Paris Saint-Germain ee Mauricio Pochettino ayaa ku booriyay taageerayaasha kooxda inay ixtiraam u muujiyaan Lionel Messi iyo Neymar ka dib markii labada lamaane lagu ooriyay guushii ay ka gaareen Bordeaux sabtidii.
Labada nin ayaa ku guul darraystay inay gacan ka geystaan ​​wadar ahaan 3-2 looga soo reebay Champions League ee Real Madrid – iyadoo Kylian Mbappe uu dhaliyay labada gool – waxayna soo mareen xilli ciyaareed niyad jab leh.
Qaybo ka mid ah jamaahiirta PSG ayaa ku qayliyay magacyada Neymar iyo Messi dhamaadkii Isbuucaan, labada ciyaaryahan ayaa sidoo kale lagu qoslay markii ay kubada haysteen, taasoo uu Pochettino ku tilmaamay mid cadaalad daro ah.
Isagoo la hadlayay Canal+ guushii 3-0 ka dib, Pochettino ayaa yiri: “Maya, aniga ahaan waa cadaalad darro, dhamaanteen waxaan u qalmanah cadhada taageerayaasha, kaliya Neymar iyo Messi waa labo ciyaaryahan oo heer caalami ah.
“Sidaas darteed waa in la ixtiraamo, marka aan guul dareysano ama aan badino, had iyo jeer waa koox ahaan, dareenkayga ciyaarta? Aad u adag, waan fahmi karnaa niyad-jabka taageerayaasheena.
“Waxaan dareemeynaa isku mid, dhamaanteen waxaan ku wada jirnaa niyad jabka weyn ee ah inaanan ka harno Champions League